C/WELI GAAS”Turkiga Muqdisho keliya ayay taageeran taasina xaq ma aha, Soomaali waa Federaal” | Newsomali
C/WELI GAAS”Turkiga Muqdisho keliya ayay taageeran taasina xaq ma aha, Soomaali waa Federaal”
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa ku dhaliilay dowladda Turkiga in Mashaariicda ay siiso Soomaaliya ay yihiin kuwo kaliya laga fuliyo Muqdisho.
C/wali Gaas ayaa sheegay in Turkiga ay yihiin dad niyad wanaag u haayo Soomaalida, balse ay wax badan ka qaldan yihiin qaabka ay u shaqeeyaan, maadaama uu xusay inay Soomaaliya ay tahay Federaal.
“Turkiga in badan ayay Soomaaliya joogaan, illaa 2011, deeq Soomaaliya oo dhan loogu tala galay ayay magaalo gaar ah iyo gobol gaar ah siiyaan, xaqna ma ahan, Muqdisho iyo agagaareekda kaliya ayaa laga fuliyaa mashaariicda”ayuu yiri C/wali Gaas.
Mr Gaas ayaa sheegay in Turkiga aysan wax shaqo oo muuqda ka qaban Puntland, isagoo xusay in aanay siin taageero tababarka ciidamada.
“Dalka waa Federaal, wax badan ayaa ka qaldan, waxaa loo baahan yahay in Federaalka sideeda loo dar dar geliyo, Turkiga waa inay fahmaan is bedelka ka dhacay Soomaaliya, wax fahan ah kama heystaan Federaalka, taas ayaa keeneysa in mar kasta dowladda Dhexe la macaamilaan.
Hadalkan ka soo yeeray Madaxweynaha Puntland ayaa ku soo beegmaya, kaddib markii dhowaan ay Heshiis la galeen shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta, kaasoo qorshihiisu yahay ballaarinta Dekeda Boosaaso.